အာရှရဲ့ အလင်းရောင် - ဝီကီပီးဒီးယား
အာရှရဲ့ အလင်းရောင် (အင်္ဂလိပ်: The Light of Asia) စာအုပ်ကို ဆရာအက်ဒွင်အာနိုး(Sir EdwinArnold) ရေးသားခဲ့သည်။ ခေါင်းစဉ်ငယ်ကို "ကြီးမားသော စွန့်လွှတ်မှု" ဟု ပေးခဲ့သည်။ လန်ဒန်တွင် ပထမဆုံး ထုတ်ဝေမှုကို ၁၈၇၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ပြုခဲ့သည်။
စာအုပ်ပြုစုသူသည် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား၏ ဘဝဖြတ်သန်းမှုကို ဖော်ပြထားသည်။ စာအုပ်တွင် ဗုဒ္ဓ၏ ဘဝ၊ စရိုက်၊ အယူအဆတို့ကို ဖော်ပြထားသည်။ စာအုပ်သည် Lalitavistara ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုပြုပြင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
စာအုပ်မဖြန့်ဝေခင် ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်တစ်ခုလောက်တွင် ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓဝါဒကို အာရှတိုက်အပြင်ဘက်တွင် သိသူအနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ ဗုဒ္ဓသည် ဓမ္မများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ ဟောကြားပြသခဲ့သည်မှာ ရာစုနှစ် ၂၅ ခုခန့်ရှိသော်လည်း အာရှတိုက်အပြင်ဘက်တွင် ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မများကို သိရှိသူမှာ အလွန်နည်းနေခဲ့သည်။ သို့သော် ဆရာအာနိုး၏ စာအုပ်ထွက်ရှိလာမှုသည် အနောက်နိုင်ငံများရှိ စာဖတ်သူများကို ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် ပထမဆုံး အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှု ဖြစ်ခဲ့သည်။
စာအုပ်သည် ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ဝေခဲ့သည့်အခါကပင် များစွာချီးမွမ်းထောပနာပြုခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ စာအုပ်တွင် ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုများစွာပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာတို့ကို ဖော်ပြထားသည်။ ထိုစာအုပ်ကို ဟိန္ဒီဘာသာစကားအပါအဝင် များစွာသော ဘာသာများသို့ ဘာသာပြန်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
၁၉၂၈ ခုနှစ်တွင် Himansu Rai နှင့် Franz Osten ရုပ်ရှင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ခေါင်းစဉ်ကို Prem Sanyas ဟု ပေးခဲ့သည်။ အဓိပ္ပါယ်သည် "အာရှရဲ့ အလင်းရောင်" ဖြစ်သည်။ ၁၈၈၇ ခုနှစ်တွင် Dudley Buck သည် ဤစာအုပ်ကိုပင် ဇာတ်လမ်းအခြေခံတစ်ခု အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။
၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ဗီဒီယိုအဖြစ် ထွက်ရှိခဲ့သည်။
ပထမခြောက်ခန်းသည် ဗုဒ္ဓ၏ ဘဝဖြစ်စဉ်ကို ရှင်းပြထားသည်။ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားအဖြစ် မွေးဖွားမှု၊ ကပိလဝတ်ပြည်၏ မင်းသား၊ ပထမဆုံးအကြိမ် သူအို၊ သူနာ၊ သူသေတို့ တွေ့ရှိခြင်း၊ တရားကျင့်ခြင်း၊ ဒုက္ကရစရိယာကျင့်ရာမှ မဇ္ဈိမပဋိပဒါသို့ ပြောင်းကာ တရားကျင့်ခြင်း စသည်တို့ကို စုံလင်စွာ ဖော်ပြထားသည်။ နောက်ထပ်အခန်းများတွင်လည်း ဗုဒ္ဓ၏ သွားခဲ့ရာနေရာများတွင် ရှင်းလင်းဟောကြားတော်မူခဲ့သည်များကို ဖော်ပြထားသည်။
↑ Sutin, L.: All is Change: The Two-Thousand Year Journey of Buddhism to the West, Little, Brown and Company, 2006. See pages 141 to 143.
↑ Harvey, P.: An Introduction to Buddhism, Cambridge University Press, 1990. See page 303.
အိုင်အမ်ဒီဘီပေါ်ရှိ Prem Sanyas
↑ Orr, N. Lee (2008). Dudley Buck, p. 98. University of Illinois Press
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာရှရဲ့_အလင်းရောင်&oldid=414010" မှ ရယူရန်
၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၁၃:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၁၃:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။